ESI EWEPU NJIKỌ NETWỌK NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Enwere ọnọdụ dị otú ahụ na onye ọrụ ahụ mepụtara ọtụtụ njikọ dị iche iche na Ịntanetị, nke ọ na-adịghị eji ugbu a, ha na-ahụkwa na panel "Njikọ nke Ugbu a". Tụlee otu esi ewepu njikọ netwọk na-ejighị ya.
Ihichapu njikọ netwọk
Iji wepu njikọ intaneti ọzọ, gaa Windows 7 na ikike onye nchịkwa.
Gụkwuo: Otu esi nweta ikike nchịkwa na Windows 7
Usoro 1: "Network and Sharing Centre"
Usoro a bara uru maka onye ọrụ Windows novice Windows.
Banye "Malite"gaa "Ogwe njikwa".
N'okpuru ala "Lee" tọọ uru "Nnukwu Oyiyi".
Mepee ihe "Network and Sharing Center".
Bugharịa na "Ntọala ngbanwe mgbanwe".
Mbụ, gbanyụọ (ọ bụrụ na enyere gị) njikọ ahụ achọrọ. Anyị wee pịa RMB wee pịa "Hichapụ".
Usoro 2: Onye njikwa ngwaọrụ
Ọ ga-ekwe omume na e mepụtara ngwaọrụ netwọk dị na njikọ netwọk nke ejikọtara ya na kọmputa. Iji kpochapụ njikọ a, ị ga-achọ iwepụ ngwaọrụ netwọk.
Meghee "Malite" ma pịa PKM site n'aha "Kọmputa". Na nchịkọta nhọrọ, gaa "Njirimara".
Na windo oghe, gaa "Onye njikwa ngwaọrụ".
Anyị na-ewepụ ihe a metụtara njikọ netwọk na-enweghị isi. Pịa PKM na ya wee pịa ihe. "Hichapụ".
Kpachara anya ka ị ghara iwepu ngwaọrụ anụ ahụ. Nke a nwere ike ịnye usoro enweghị ike.
Usoro a bara uru maka ndị ọkachamara nwere ahụmahụ.
Pịa igodo Nchikota "Merie R" ma tinye iwu ahụregedit.
Hichapụ profaịlụ. Anyị pịa PKM na nke ọ bụla ma họrọ "Hichapụ".
Rụgharịa OS ma mee njikọ ahụ ọzọ.
Hụkwa: Otu esi ele adreesị MAC nke kọmputa na Windows 7
Site n'iji usoro dị mfe akọwapụtara n'elu, anyị na-ewepụ njikọ netwọk na-adịghị mkpa na Windows 7.